स्वागतम् स्वागतम् पाहुनालाई: 'दौरा-सुरुवाल लगाउँदा जोकर'
'दौरा-सुरुवाल लगाउँदा जोकर'
दौरा-सुरुवाल नेपाली राष्ट्रिय पोसाक मानिए पनि सरकारका अधिकांश उच्च अधिकारी नै कार्यालय जाँदा दौरा-सुरुवाल लगाउँदैनन् । दौरा- सुरुवालमा कार्यालय आउने कर्मचारी संख्या अचेल सीमित बन्दै गएको छ । दौरा-सुरुवाल साटो अधिकांश उच्च अधिकारीहरू सर्ट-पाइन्ट र कोर्टमा कार्यालय जाने गरेका छन् भने केही सुट-पाइन्ट र टाइमा सजिएर कार्यालय जान्छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयम्ले शपथग्रहण कार्यक्रममै राष्ट्रिय पोसाक नलगाएको विषयले त्यतिखेर चर्चा पाएको थियो । दाहालले त्यसपछि पनि राष्ट्रिय पोसाक लगाएको बिरलै देख्न पाइन्छ । अधिकांश कर्मचारीलाई दौरा-सुरुवाल किन नलगाउनुभएको भन्ने प्रश्नमा प्रायः सबैको जवाफ एउटै हुन्छ, 'प्रधानमन्त्रीले त लाउँदैनन हामीले किन लाउने ?' राष्ट्रिय पोसाकप्रति सरकारले सम्मान गर्न नसकेको गुनासो कर्मचारीको छ । मुक्त कमैया व्यवस्थापन समितिका सचिव डा. केशवराज कँडेल राष्ट्रिय पोसाकको पहिचान लोप हुने अवस्थामा आइसकेको बताउँछन् । उनले विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम बाहेक कार्यालय आउँदा आफूले राष्ट्रिय पोसाक कहिल्यै नलगाउने जानकारी दिए । 'सरकारबाटै अनिवार्य बनाइएको छैन त्यसैले नलगाएको,' उनले भने । वन मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रकुमार ढुंगेल भने राष्ट्रिय पोसाकका सन्दर्भमा नमीठो अनुभव भएको बताउँछन् । उनले राष्ट्रिय पोसाकको सम्मान अधिकांश सरकारी अधिकारीबाटै हुन नसकेको अनुभव सुनाए । 'म पहिला राष्ट्रिय पोशाक लगाएर कार्यालयमा आउँदा साथीभाइले जोकरजस्तो देखिएको भनी व्यंग्य गर्थे त्यसैले लगाउन छाडिदिएँ,' ढुंगेलले गुनासो पोखे । उनले ५/६ जोर दौरा-सुरुवाल दराजमै थन्काएर राखेको बताए । 'हामीले नेपाली पन, कला र संस्कृतिलाई पूरै बेवास्ता गर्दै गइरहेका छौं,' उनले भने, 'राष्ट्रिय पोसाक पनि यसैको सिकार भइरहेको छ ।' उनले नेपाली पहिचान राष्ट्रिय पोसाकमा राजनीति घुसेकाले समस्या देखिएको दाबी गरे । लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता निरञ्जनप्रसाद उपाध्याय पहिला राष्ट्रिय पोसाक मानिंदै आएको दौरा- सुरुवालमै कार्यालय जाने गरे पनि सबैले लगाउन छाडेपछि आफूले पनि छाडिदिएको बताउँछन् । तर, दौरा- सुरुवालप्रतिको आस्था र विश्वास गुम बनाउन नहुनेमा उनको ठम्याइ छ । 'दौरा-सुरुवाल नेपालीको वास्तविक पहिचान तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत परििचत भएकाले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका लागि सरकारले अनिवार्य बनाउनुपर्छ', उनले भने । केही वर्षअघि सरकारी कार्यालयका कर्मचारी दौरा-सुरुवालमै कार्यालय जाने गरे पनि मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमय भएपछि राष्ट्रिय पोसाकलाई कुनै वर्गविशेषले जातजाति तथा क्षेत्रविशेष स्तरको राजनीतिभित्र घुसाएपछि गुमनाम बनाइन थालेकामा चिन्तित छन् संस्कृतिविद् । -सागर पण्डित
Posted by बिजय कुमार श्रेष्ठ at 5:33 PM
दौरा-सुरुवाल नेपाली राष्ट्रिय पोसाक मानिए पनि सरका...
Santosh Lama Nepali Tara-2